ASAM ၏စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၂၀၁၁) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
စွဲလမ်းမှု၏ ASAM ရဲ့အဓိပ္ပာယ်: သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (2011)
ASAM ၏စွဲလမ်းမှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကြေငြာသည့်အောက်ပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၏ pdf ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည် ဒီမှာ.
အဓိပ္ပါယ်နှင့်မူဝါဒကြေညာချက်တခုတခုအပေါ်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါး Link ကို: အမေရိက၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများ (ASAM) သည်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
နှစျခု YBOP ဆောင်းပါးများကို:
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲ (2011) ကြမယ်,။ စွဲလမ်းဆေးပညာအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း DSM သဘောမတူရန်သဘောတူ
သင်က Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်ပါသလား? ASAM (2011) မေးပါ။ porn အသုံးပြုသူများသည်ကချိတ်ဆက်ခံရဖို့နဲ့တူရဲ့အဘယ်အရာကိုဖော်ပြရန်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - ချက်ချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်
ဆက်သွယ်ရန်: Alexis Geier-Horan
ASAM စွဲ NEW အဓိပ္ပာယ်ဖြန့်ချိ
စွဲနေတဲ့နာတာရှည်ဦးနှောက်ရောဂါ, မင့်မကောင်းပါအပြုအမူသို့မဟုတ်မကောင်းပါရွေးချယ်မှု Is
Chevy Chase, MD သြဂုတ်လ 15, 2011 - စွဲဆေးပညာ၏ American Society (ASAM) ရိုးရှင်းစွာအလွန်အကျွံအရက်, မူးယစ်ဆေးဝါး, လောင်းကစားသို့မဟုတ်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့အပြုအမူပြဿနာကိုမပေးကြောင်းစွဲမီးမောင်းထိုးပြစွဲ၏သစ်တစ်ခုနှင့်အဓိပ္ပါယ်နာတာရှည်ဦးနှောက်ရောဂါဖြန့်ချိခြင်းနှင့်သိရပါတယ် ။ ဒါကပထမဦးဆုံးအကြိမ် ASAM စွဲပြဿနာပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမှတစ်ခုတည်းကိုသာဆက်စပ်မဟုတ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအနေအထားခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ကလူသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်များ-သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောနာမည်ကြီးတွေသို့မဟုတ်အဖြစ်အများပြည်သူကိန်းဂဏန်းများအတွက် compulsive နှင့်ထိခိုက်အပြုအမူတွေကိုမြင်သောအခါနိုင်ငံရေးသမားများ-သူတို့မကြာခဏပြဿနာအဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အပြုအမူအပေါ်သာအာရုံစိုက်။ သို့သော်ဤအပြင်အပြုအမူတွေကိုကုသနဲ့စွဲတားဆီးဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံ ASAM, ဆေးသမား၏နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်အသစ်သောအဓိပ်ပါယျရှိသညျအတိုငျး, တကယ်ဦးနှောက်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောဒေသများပါဝငျကွောငျးတစ်ခုနောက်ခံရောဂါသရုပ်ဖြစ်ကြသည်။
"ဟာသူ့ရဲ့အဓိကမှာစွဲရုံလူမှုရေးပြဿနာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားပြဿနာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအဘယ်သူ၏အပြုအမူဤသူအပေါင်းတို့သည်အခြားဒေသများရှိမန်နီးဖက်စ်ဦးနှောက်ပြဿနာရဲ့ "ဟုဒေါက်တာမိုက်ကယ် Miller ကသစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြီးကြပ်သူကို ASAM ၏အတိတ်သမ္မတကပြောပါတယ်။ "စွဲလမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်အတော်များများအပြုအမူတွေကိုမှန်ကန်ပြဿနာတွေနဲ့တခါတရံပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ရောဂါဦးနှောက်မဟုတ်ဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းပါ။ မအပြင်လုပ်ရပ်များ, နောက်ခံအာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါပဲ။ "
အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် 80 ကျွမ်းကျင်သူများကထက်ပိုမိုတက်ကြွစွာထိပ်တန်းစွဲအာဏာပိုင်များ, စွဲဆေးဝါး Clinician နှင့်တိုင်းပြည်အနှံ့ကနေဦးဆောင် neuroscience သုတေသီများအပါအဝင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေနဲ့အထူးကြပ်မတ်, လေးနှစ်ဖြစ်စဉ်ကိုကနေရလဒ်။ များစွာသောပြည်နယ်များထံမှ ASAM နှင့်မျြးအခနျးကွီးသမ္မတ၏အပြည့်အဝအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. , နှစ်ဦးစလုံးပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍများ၌သုတေသနလုပ်ငန်းနှင့်မူဝါဒလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကျယ်ပြန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးရှိ၏။
အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါပြဿနာများကဲ့သို့သောအခြားအကြောင်းတရားများ၏ရလဒ်မဟုတ်ပါဘူးရဲ့အဓိပ်ပာယျ, တစ်မူလတန်းရောဂါအဖြစ်စွဲဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဘဝကိုအချိန်ကျော်ကုသစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဒါကြောင့်စွဲလည်း, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့နာတာရှည်ရောဂါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
neuroscience အတွက်တိုးတက်မှု၏ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု ASAM ဦးနှောက်ထဲမှာပေါ်မယ့်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်ပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းစွဲလမ်းယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။ သုတေသနအစားအစာ, လိင်, အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူယခင်အတွေ့အကြုံများ၏အမှတ်တရများစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏တဏှာနှင့်သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပေါ်စဉ်စွဲ၏ရောဂါ, ကျန်းမာအပြုအမူတွေ supplant ကြောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမှဦးဆောင်ဦးနှောက်၏ဆုလာဘ် circuitry အတွင်း neurotransmission နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသထားတယ်။
ဤအတောအတွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုအုပ်ချုပ်ကြောင်းဦးနှောက် circuitry ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ်ဆုလာဘ်များအလုပ်မဖြစ်လိုက်စားအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဒီရောဂါအတွက်ပြောင်းလဲနေသည်။ ဦးနှောက်၏ဤဧရိယာနေဆဲအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးစောစောထိတွေ့မှုနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌စွဲလမ်းပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေဆက်စပ်သောအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသော, ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှစ်တာကာလအတွင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
စွဲလမ်းနှင့်အတူလူ antisocial နှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူအပေါ်ရွေးချယ်မှုကိုရှိမရှိကျော်ကာလကြာရှည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိနေပါသည်ဒေါက်တာ Raju Hajela, အတိတ်စွဲဆေးပညာ၏ကနေဒါ Society ၏ဥက္ကဌနှင့်သစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အပေါ် ASAM ကော်မတီကုလားထိုင်ကဆိုသည်။ သူဟာရောဂါသူတို့ကိုလှည့်ပတ်အခြားသူများနားလည်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုနည်းလမ်းတွေထဲမှာပြုမူဖို့လူမောင်းရသောအတှေးအချေါ, ခံစားခကျြမြားနှငျ့သဘောထားအမြင်အတွက်ပျက်ယွင်း, ဖန်တီး "ဖော်ပြထားသည်။ ရိုးရှင်းစွာအထား, စွဲနေတဲ့ရှေးခယျြမှုမဟုတ်ပါဘူး။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေရောဂါမဟုတ်ဘဲအကြောင်းမရှိတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းပါ။ "
"ရွေးချယ်မှုနေဆဲအကူအညီနဲ့ရတဲ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ရှေးခယျြမှု၏ neurobiology အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါနေစဉ်, စွဲနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆေးကုသမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရိုက်ထည့်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးကျန်းမာအသက်အဘို့အရွေးချယ်မှုလုပ်ရပေမည်။ တစ်ဦးတည်းစွဲကုသနိုင်သည့်အဘယ်သူမျှမဆေးလုံးလည်းမရှိသောကြောင့်, ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုကျော်ပြန်လည်နာလန်ထူရွေးချယ်ရာတွင်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ် "ဟု Hajela ကဆိုသည်။
"အများစုကနာတာရှည်ရောဂါများထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါနှင့်အတူလူကျန်းမာသန်စွမ်းကိုစားသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကြားဝင်အပြင်, လေ့ကျင့်ခန်းစတင်ရွေးချယ်ခြင်းအဖြစ်အမူအကျင့်ရွေးချယ်မှု, require" ဟုဒေါက်တာ Miller ကပြောခဲ့သည်။ "ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်စွဲလမ်း၏ရောဂါနှင့်အတူလူတစ်ဦးမှာ smirking, အပြစ်တင်, ကိုယ်ကျင့်တရားကိုရပ်တန့်ရန်ရှိသည်များနှင့်အကူအညီနှငျ့သငျ့လျြောသောကုသမှုရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်အကူအညီများပေးအပ်ရရှိရန်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်မိသားစုများအတွက်အခွင့်အလမ်းကိုစတင်ပါ။ "
ဒေါက်တာ Miller က ASAM ၏အတိတ်သမ္မတဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Hajela စွဲဆေးပညာ၏ကနေဒါ Society ၏အတိတ်သမ္မတဖြစ်ပြီး ASAM တစ်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်းဆေးပညာများအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း access ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စွဲကုသမှု၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်း, ဆေးသမားပညာပေးနှင့်အများပြည်သူ, သုတေသနနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး supporting များနှင့်အတူလူနာများ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဆေးသမား၏သင့်လျော်သောအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရန်ထံအပ်နှံ 3,000 သမားနှင့်နီးစပ်သူကိုယ်စားပြုနေတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည် စှဲ။
စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society
4601 မြောက်အမေရိကပန်းခြံရိပ်သာလမ်း, Upper Arcade, Suite 101 Chevy Chase, MD 20815-4520
ဖုန်း (301) 656-3920 ●ဖက်စ် 301-656-3815 ●က်ဘ် www.asam.org